प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिबाट अन्तिम मौका, नत्र फेरि संसद विघटन ! भित्रभित्रै यस्तो तयारी - Media Dabali
प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिबाट अन्तिम मौका, नत्र फेरि संसद विघटन ! भित्रभित्रै यस्तो तयारी
बिहिवार, जेठ ६ २०७८
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आत्तिएका थिए । प्रचण्ड चुनाव देखेर डराउँछन् तर प्रतिनिधिसभामा बहुमतसिद्ध गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न पनि सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । तर दलहरूले बहुमतसहित दाबी पेश गर्न सकेनन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बने । ओलीले समेत आफूले विश्वासको मत नपाउने भएकाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेका छन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको आधारसहित दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
यसअघि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पेश नभएपछि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर अब धारा ७६(५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेका प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(७) मा जानेछ । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ । एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीसँग सहमतिको प्रयासका लागि छलफल गरिरहेको र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पनि ओलीसँगै नजिक रहेका बेला विपक्षी गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना देखिँदैन ।
यसरी राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिनिधिसभा विघटनतिर गइरहेका बेला मध्यावधि चुनाव देखेर डराउने प्रचण्ड के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ ।